जाडोमा भक्का प्यारो की सिरक ? – Nirantarkhabar
जाडोमा भक्का प्यारो की सिरक ?
भक्का हाउस को व्यवसायिक उज्वल भविष्यको संकेत
कुनै पनि कुरा हत्तपत्त छाड्न सकिदैन भने यो ‘जाडोको सिरक’ जस्तै हो भन्ने चलन पनि छ । जाडोमा सिरकको न्यानो यति प्यारो हुन्छ, सम्भव भएदेखि त्यो सिरक छोड्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । अन्य समयमा विहान ‘मर्निङ वाक’ मा निस्कनेको संख्या धेरै हुन्छ । तर जाडोमा त्यो संख्या अलि कम भएको देख्न सकिन्छ । विहानीको जाडोमा मानिस हत्तपत्त वाहिर निस्कन नचाहनुमा चिसोको ‘अवरोधक’ भुमिका र सिरकको न्यानोको ‘चुम्बकिय’ भुमिका कारक हुन भन्दा खासै फरक नपर्ला ।
केही दिन अघिको एउटा प्रसङ्ग : एक महिला र पुरुष साथी विचको कुराकानी थियो । गफैगफमा जाडो र ‘मर्निङ वाक’को नै कुरा निस्कियो । पुरुषले भने जाडोले ‘मर्निङ वाक’ पनि निस्कन गाह्राे भको छ । सिरक छोड्न सकिदैन धेरै दिनदेखि जिउमा कसरतको कमी छ । महिलाले भनिन्,‘जाडोसँग डराएर नि ‘मर्निङ वाक’ नजाने हो त ? त्यो त छुटाउनै हुँदैन ।’ उनको सुझाव थियो,‘नियमित जानु ।बरु फर्कदा तात्तातो भक्का खानु।’ उनको आसय थियो विहानीको जाडोमा सिरकको न्यानो लाई चुनौती दिने अरु केही छ भने भक्का नै हो । साँच्चिकै, तुुलना गर्न मिल्ने भए जाडोमा सिरकको न्यानो र भक्काको स्वादको तुलना गरी हेरौं त । हुन त भक्का स्वाद सँग सम्बन्धित भएकोले कसैलाई मन पर्ला कसैलाई नपर्ला । तर मन पर्नेहरुले भने भक्काको स्वादलाई पनि सिरकको न्यानोले पाउने बराबरकै अङ्क देलान् ।
जब जाडोले निर्दयीपन बढाउँदै लान्छ तब हामीले पनि त्यस्को जवाफी क्रियाकलाप गर्नैपर्दछ । त्यसैले चौक चौकमा आगो तापेर बस्ने अनि गफिने,चिया पसलहरुमा चियाको चुस्की लिने क्रम बढ्दै जान्छ । त्यस्तै जाडोमा अत्यधिक मन पराइने खानेकुरा भक्का पनि हो । त्यसैले भक्का पकाउने ठाउँमा पनि विहान विहान मानिसहरुको जमघट हुन थालेको छ । भक्काको साथी अचारले अझ भक्काको स्वाद लाई‘मोडीफाई’ गर्न सघाउँछ । भक्कासँगै टमाटर र धनियाँको अचार झनै स्वादिलो हुन्छ । दिनानुदिन जाडो छिप्पिँदै जाँदा हरेक विहानीमा भक्का पकाउनेहरुलाई पनि भ्यानभ्याइ हुन थालेको छ । सुन्दरहरैचा खोर्सानेकी माधव चौधरीलाई पनि यस्तै चटारो छ आजकल । उहाँ एक्लैले त भक्का पकाउने तयारी गर्न पनि भ्याउनुहुन्न त्यसैले छोरी र बुहारीले पनि उहालाई सघाउने गर्नुभएको छ । यता बेलबारीकी धुर्मिला राजवंशीको ‘भक्का व्यस्तता’ पनि कम्ती छैन् ।
हेर्दा सामान्य देखिने भक्का बनाउदा धेरै मेहनत गर्नुपर्नेहुन्छ । माधव भन्नुहुन्छ चामल भिजाउने पिठो कुट्ने, अचारको तयारी गर्ने जस्ता धेरै काम हुन्छन् । भक्का पकाउने भाँडाको तयारीका लागि हलुङगेको भाँडोमा पानी राखिन्छ । त्यसभन्दा माथी माटोको थाल वा ढकन आकारको अर्को भाँडो राखिन्छ जस्को विचमा प्वाल हुन्छ । त्यही प्वालको माथीपटि पिठोको भक्का राखिन्छ । भाँडोमा आगो दिएपछि पानी बाफमा परिणत हुन्छ र त्यसैले भक्का पाक्छ । भाँडाको पानी सकिँदै जाँदा थप्दै जानुपर्छ । यसरी तयार हुने भक्कामा रस भिजेका मानिसहरु पनि धेरै हुन्छन् । विहान मर्निङ वाकमा निस्कने,कलेज जाने,काम विषेशले विहानै कतै निस्कने र विशेषगरी भक्का नखाई नसक्नेहरु भक्काका नियमित ग्राहक हुन्छन् । चिसो विहानीको न्यानो सिरक सरक्कै फालेर भक्काको स्वाद लिन जानेहरुको जमघट गज्जबकै देखिन्छ ।
भक्का मन पराउने मध्ये सुकुना क्याम्पसमा स्नातक पढ्दै आउनुभएकी पुजा शाह पनि हुनुहुन्छ । भक्का स्वास्थ्यकाे लागिपनि राम्राे हुने उहाँको बुझाइछ छ । चामलको परिकार भएकाले २/३ वटा भक्का खाँदा अडिलो खाजाको रुपमै काम गर्ने उहाँको बुझाई छ ।
‘भक्का हाउस’ को व्यवसायिक उज्वल भविष्यको संकेत
हरेकवर्ष जाडो समयमा र विशेषगरी विहानीको समयमा भक्का खोज्नेहरु धेरै हुन्छन् । असोज देखि फागुन चैतसम्म भक्का चल्तीको समय भएको बेलबारी १ मा भक्का पसल चलाउनुभएकी धुर्मिला राजवंशी बताउनुहुन्छ । राजवंशी र थारु समुदायबाट विस्तारै सबैमा लोकप्रिय हुँदै गएको यो एउटा नेपाली मौलिक परिकार पनि हो । विशेष प्रकारको मेहनत र विधिले तयार हुने भक्का सबैले रुचाउने क्रम बढ्दै गर्दा काठमाण्डौमा त भक्का हाउस नै खुलेको छ । जहाँ सधै भरी भक्का खान पाइन्छ । पुर्वतिर मौसमी रुपमै भएपनि हरेक जाडो सिजनमा यसको विक्रिबाट धेरैलाई आय आर्जनको माध्यम बनेकै छ । पुर्वमा उहिलेबाट नै भक्काको लोकप्रियता छँदैछ ।भक्काको स्वाद यसरी लोकप्रिय हुँदै जाँदा यसको व्यवसायिक भविष्य पनि उज्ववल रहेको संकेत गर्दछ । पुर्वमै पनि भक्का हाउसहरु सञ्चालनमा ल्याउँदा व्यवसायिक सफलताको सम्भावना समेत देखिन्छ ।
भूमि समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर – प्रधानमन्त्री ओली
बेलबारीमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको क्षमता परिक्षण तथा हण्डिफोर खेल
दैनिक चार करोड नाफा , मूल्य घटायो दुई रुपैयाँ मात्र